Magaalo Loogu Yeedho Jannada Dunida
Magaalada ZELL AM SEE oo ku taalla Austria, waa goob caan ku ah dhinaca dalxiiska, magaaladan oo ay ku nool yihiin illaa 10,000 oo qof ayaa soo jiidata dalxiisayaasha dunida oo u yaqaana jannadii dunida.
Magaalada ZELL AM SEE oo ku taalla Austria, waa goob caan ku ah dhinaca dalxiiska, magaaladan oo ay ku nool yihiin illaa 10,000 oo qof ayaa waxay soo jiidataa dalxiisayaasha dunida oo u yaqaana jannadii dunida.
Arrimaha xiisaha leh ayaa ah, haddii aad dhex marto magaaladan waxaad u malaynaysaa inaad dhex joogtid wadamada carabta, waayo waxaa magaalada dhex maraya gaadiid wata calaamadda wadamada khaliijka, waxaa suuqyada maraya dad carbeed.
Sannadkasta waxaa booqda illaa 70,000 oo ah dadka lacagta haysta ee wadamada bariga dhexe.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Saxafi ku sugan magaaladaas Cabdinaasir Sola